Ungabenza kanjani ngokwezifiso Oxhumana nabo obathandayo ku-iOS 10 | Ngivela kwa-mac
Ungayenza kanjani ngokwezifiso Oxhumana nabo obathandayo ku-iOS 10
Nge-iOS 10, kwethulwe uhlelo olusha lwewijethi olusivumela ukuthi sihlele oxhumana nabo esibathandayo ngendlela ecace kakhudlwana, futhi sifinyelele kubo ngokushesha kunakuqala.
Leli zinga elisha lokwenza ngokwezifiso lidlula kude nemisebenzi yezingcingo. Nge-iOS 10 singakha izithonjana ezahlukahlukene zoxhumana naye ofanayo ngokwendlela esivame ukuxhumana ngayo ngakho konke. Ngakho-ke, singakwazi ukukhiqiza izithonjana ukushaya ucingo nge-FaceTime, ukuthumela umlayezo noma ukuthumela i-imeyili kumuntu esimfunayo.
Ukuguqula noma ukwenza ibhukumaka koxhumana naye manje kwenza isici sisebenziseke kakhulu futhi sibe ngesomuntu siqu, nangaphezu kwezenzo ezisheshayo ze-3D Touch zezinguqulo zangaphambilini ze-iOS. Ngakolunye uhlangothi, akumelwe sikhohlwe izintandokazi zokuxhumana eziyisisekelo esizigcine ngaphakathi kwekhadi loxhumana nabo ngamunye ku-iPhone, zizobaluleka lapho senza ngokwezifiso iwijethi yethu yoxhumana nabo. Ngakho-ke, okokuqala, qiniseka ukuthi ungeze wonke amakheli e-imeyili nezinombolo zocingo zoxhumana nabo, okungenani lezo ozozisebenzisa njengezintandokazi.
1 Yenza ngokwezifiso oxhumana nabo obathandayo ku-iOS 10
2 Izilungiselelo zewijethi zezintandokazi
Yenza ngokwezifiso oxhumana nabo obathandayo ku-iOS 10
Uma usuvele ulande futhi wafaka iOS 10 Ku-iPhone yakho, kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo ukwenza ngezifiso oxhumana nabo obathandayo ngohlelo lokusebenza lwefoni efonini yakho.
Vula uhlelo lokusebenza lwefoni ku-iPhone yakho.
Khetha ithebhu "Izintandokazi" etholakala imajini engezansi kwesobunxele, kodwa ungakhethi noma yibaphi oxhumana nabo abavela ohlwini.
Chofoza inkinobho "+" ozoyithola ekhoneni eliphezulu elingakwesokunxele kwesikrini.
Manje thola oxhumana naye ofuna ukumfaka bese ukumkhetha.
Khetha indlela ofuna ukuxhumana naye ngqo: umyalezo wombhalo, ucingo, ikholi yevidiyo noma i-imeyili.
Ukukhetha inombolo noma i-imeyili okungeyona ekhonjiswa ngokuzenzakalela, cindezela umcibisholo omncane okhomba phansi nokuthi uzobona eduze koMlayezo, Ucingo, Ividiyo, noma iMeyili bese ukhetha noma iyiphi inombolo noma i-imeyili yalabo osuvele okugcinwe ku-iPhone yakho kulo oxhumana naye othile.
Buyela kuthebhu yezintandokazi futhi isinqamuleli esisha kulo oxhumana naye sizovela ezansi kohlu lwezintandokazi.
Manje chofoza ku- "Hlela" ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini ukuze ususe noma ushintshe okubalulekile koxhumana nabo.
Lapho usuqedile ukuhlela oxhumana nabo obathandayo abasha, qiniseka ukuthi oxhumana nabo abane bokuqala ohlwini bayizintandokazi zakho zangempela bese ubangeza kuwijethi (yize kungafika kufinyelela kwayisishiyagalombili), njengoba sizobona ngezansi. Ukuze wenze lokhu, ohlwini, cindezela Hlela, bamba umunwe wakho kuphawu olunemigqa emithathu oluvela eduze koxhumana naye ngamunye, bese ulihudulela phezulu noma phansi lize libe sesimweni osifunayo. Uma usuqedile, cindezela KULUNGILE.
Izilungiselelo zewijethi zezintandokazi
Lolu hlu lwezintandokazi ezintsha lusizo kakhulu ngoba ikuvumela ukuthi weqe ngqo ukuxhumana ngendlela ethile nomuntu othizenoma. Ngasikhathi sinye, usondelene kakhulu nabantu oxhumana nabo kakhulu. Kepha manje kuza okungcono kakhulu, lungiselela iwijethi ezokunikeza isinqamuleli sangempela kulokho esisanda kukwenza ngokwezifiso. Ukuze wenze lokhu, kufanele nje ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo.
Vula isikrini sewijethi ku-iPhone yakho ngokuswayipha ngqo kusuka kusikrini sokuqala.
Skrolela ezansi kwamawijethi bese ushaya u- "Hlela".
Thola "Izintandokazi" bese ucindezela inkinobho eluhlaza + ukuyifaka kumawijethi akho.
Sebenzisa ibha ephindwe kathathu oyibona eduze kwaleli wijethi ukuyihambisa endaweni oyifunayo.
Chofoza u- "Kwenziwe" ukulondoloza izinguquko zakho. Manje kufanele ubone iwijethi yakho yezintandokazi. Izine zokuqala yizona ezine zokuqala ozibeke ohlwini lwakho lwezintandokazi kanjena.
Chofoza ku- "Bonisa okuningi" ukuze unwebise iwijethi ibe oxhumana nabo abayisishiyagalombili.
Kusuka kuwijethi oyintandokazi yoxhumana nabo ungafinyelela koxhumana nabo abangafika kwabayisishiyagalombili. Ungabuyela kuhlelo lokusebenza lwefoni ukuze ungeze futhi uhlele kabusha oxhumana nabo ababaluleke kakhulu noma uhlele oxhumana naye. Izinguquko zizobonakala kuwijethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayenza kanjani ngokwezifiso Oxhumana nabo obathandayo ku-iOS 10
Onjiniyela bangaphambili be-Oculus neMagic Leap bajoyina i-Apple
Uma ufuna imemori eyengeziwe ye-MacBook yakho, nazi izinketho eziningana ngamanani entengo